I-Apple ishicilela uhambo oluqondisiwe nezindaba ze-iPhone 13 entsha | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 18/09/2021 13:16 | iPhone 13, Izaziso
Ukubhuka kwe-iPhone 13 entsha kuqale umlingisi futhi ngoSepthemba 24, amayunithi okuqala azoqala ukufika kubanikazi bawo. I-Apple ikhethe ama-smartphones amasha anikwa amandla yi-chip entsha ye-A15 Bionic kanye namakhamera ahlelwe kabusha akwazi ukurekhoda amavidiyo ku-ProRes futhi aqophe nokuqopha ama-smart shots ngokuhlukahluka okufiphele ngemodi yayo yeCinema. Yize zonke izindaba zichazwe kahle futhi zithuthukiswa kuwebhusayithi esemthethweni, U-Apple ushicilele ividiyo entsha ngesimo sohambo oluqondisiwe oluqokomisa izinto ezintsha ezisezingeni eliphezulu ze-iPhone 13.
Izinto ezintsha ezintsha ze-iPhone 13 zivela ohambweni oluqondisiwe lwe-Apple
Isithombe sibiza amagama ayinkulungwane nokuthi i-Apple yazi ngekhanda. Kungakho uthumele ifayela le- Uhambo oluqondisiwe lokugqamisa okusha ku-iPhone 13 naku-iPhone 13 Pro kuzo zonke izinhlobo zayo. Kuyo yonke ividiyo siyabona ukuthi kwethulwa kanjani izici zobuchwepheshe zamadivayisi ukwenza isenzo. Ungabona imodi yeCinema isebenza, izibonelo lapho ukumelana kwe-iPhone 13 kuvivinywa noma izibonelo zokusebenza kwamakhamera amasha.
I-iPhone 13 ne-iPhone 13 Mini, sikutshela yonke imininingwane
Eqinisweni, lolu hambo luhlukaniswe isingeniso sezincazelo zobuchwepheshe zamamodeli amane atholakalayo. Okulandelayo, siqhubeka ukukhombisa ukusebenza kwemodi yeCinema futhi sihlole ubulukhuni bedivayisi nokumelana noketshezi. Ngemuva kwalokho, kuqhakanjiswa isikrini esisha se-Super Retina XDR futhi kuhlaziywa amandla amabhethri. Futhi, ekugcineni, ufinyelela isigaba sezithombe lapho izitayela zezithombe, ukusondeza kwedijithali nemodi ye-Macro ye-iPhone 13 Pro ivelele.
Le kuyindlela ethokozisayo evela ku-Apple ukusondeza ama-iPhone 13 specs kubasebenzisi ngokusebenzisa ividiyo esebenzayo neqondiswayo lapho abasebenzisi kanye nomsebenzi we-Big Apple kungabonakala beqondisa umsebenzi. Kungenzeka ukuthi kumadivayisi azayo sizobona into efanayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » I-Apple ishicilela uhambo oluqondisiwe nezindaba ze-iPhone 13 entsha
I-Overcast yamukela amawijethi futhi ingeza ukusebenza okusha kweCarPlay